China Omenala sized mbuaha agba ịnyịnya mabulu oyiyi na rụpụta na Factory | Ezigbo Arts
Life Size marble Statue of Lady of Mount Carmel maka ...
Factory tinyekwa anyanwụ dara pink mabul ọdụm oyiyi maka ire
Hazie irzọ Odum Abụọ Akpụkpọ Nkume Nkume Akuku ...
Omenala buru ibu mara nma mabul agu
Omenala sized agba agba ịnyịnya mabul akpụ
Nọmba nlereanya: FMI-219
Size: ahaziri ahaziri
Ihe: eke Marble
Kwụ mentgwọ: T / T, Western Union
Horsenyịnya mara mma nke nwere ụkwụ anọ gbara ọkpụrụkpụ na nke ọma. Ahụ dị ezigbo nro, dịka a ga-asị na mmanụ mmanụ na-egbu maramara. Isi ntutu dị n'olu ahụ kwụgidere n'usoro.
A na-agbanye ntị abụọ elu, na-ege ntị na mmegharị gbara gburugburu n'oge ọ bụla, dị ka a ga-asị na ha kwụ ọtọ. Nnukwu anya abụọ na-agagharị mgbe niile dị nso, ọdụ ogologo na-agbada mgbe ụfọdụ, mgbe ụfọdụ ọ na-efegharị n'akụkụ n'akụkụ, ụkwụ anọ dị ogologo dị ka ogidi anọ gbara agba nwere nnukwu ike.
Horsenyịnya Arabian bụ ụdị ịnyịnya ochie dị oke ọnụ ahịa n'ụwa. Nkà mmụta ihe ochie chọpụtara na ha malitere afọ 4,500 gara aga, sitere na Arabian Peninsula. A na-eji nlezianya ahọrọ ma bred ruo ogologo oge n'okpuru ọnọdụ nke oké ọkọchị, obere mmiri ozuzo na ụkọ nri. Horsenyịnya a arụwo ọrụ dị mkpa n'ịkpụzi ọtụtụ ụdị ịnyịnya magburu onwe ya n'ụwa. Horsesnyịnya nke ọma, ịnyịnya Orrov, ịnyịnya Morgen, wdg, ha niile nwere ọbara nke ịnyịnya Arabia.
Ogologo ịnyịnya nwere vertebrae 24, ebe ịnyịnya Arabian nwere naanị 23. Isi dị obere ma dị ọcha, anya buru ibu ma na-enwu gbaa, olu kwụ ọtọ, ọkpọiso sara mbara, ngwa agha dị elu, azụ na ukwu dị mkpụmkpụ ma sie ike, ọkpụkpụ dị gịrịgịrị ma sie ike, aka na ụkwụ dị gịrịgịrị, akwara ndị ahụ mepụtara, ahụ na-akpọ nkụ, kootu ahụ dị nro dị ka silk, ikike ịmụpụta dịkwa ike. ndu ogologo. Odi ahu kwesiri ka nma ma dikwa nma. Ọ bụ ịnyịnya dị elu dị elu nke nwere asọmpi ịnyịnya pụrụ iche nke Arabia. Ọsọ ọsọ ya adịghị mma dịka nke Bekee, mana agbụrụ dị ogologo dị mma. N'ihi ọdịdị ya na ike ya siri ike, ụfọdụ ụdị ụfọdụ na-adabere na iwebata ịnyịnya Arabian iji meziwanye ọdịdị ha ma melite ikike ha.
Horsesnyịnya ndị Arebia amalitela ma tolite n'ọzara. A na-ahụta ha dị ka akụ nke ndị Bedouin. A na-akpọkarị ha n'ụlọ ma chebe ha n'ụlọikwuu. N'ihi mmekọrịta chiri anya ha na ụmụ mmadụ, ha nwere obi ebere, nwee ọgụgụ isi ma dị njikere ime ihe na-atọ ụtọ. Ha nwekwara ikike ọgụgụ isi dị elu na ịmụrụ anya, ha dịkwa mma maka mbuso agha na agha. N'ihi nnakọta a na nghọta, ndị nwe ịnyịnya nke oge a ga-akwụrịrị ndidi na nsọpụrụ zuru oke iji chịkwaa ha.
Nke a ọmarịcha ịnyịnya Arabia bụ ebube na mara, egosipụta na ọmarịcha agwakọta marble. Ọmarịcha ọrụ magburu onwe ya nke onye omenkà a mepụtara nwere nkọwa magburu onwe ya na ọdịdị zuru oke. Na akụkụ akụkụ anọ dị ka ndabere, tinye ya ozugbo na mma gị dị n'èzí.
Nke gara aga: Omenala buru ibu ugo ugo bere n'ihi na ire
Osote: Ezi mma ọcha na agba ọcha marble Horse
Pink agba ije ọdụm akpụrụ akpụ maka ire ere
White Marble Winged Lion Statue na oriọna maka ọrịre
Omenala sized nwa mabul ugo ugodi akpụ ...
White Marble Lion Family Statue Animal Sculptur ...
Large White Marble Lion akpụ na Ball statu ...
Omenala sized mara mma na-acha ọcha ọcha na agba ịnyịnya oyiyi ...